Baarlamaanka Kenya oo Khilaafka Soomaaliya iyo kenya Su’aalo ka weydiinaya Wasiirkooda Arimaha Dibadda – Kalfadhi
February 19, 2019 Kalfadhi
Wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku heshiiyay in la qaboojiyo Xiisadda Siyaasadeed ee u dhaxeysa labada dal, taas oo cirka isku shareertay maalmihii ugu dambeeyay oo ay hadalo is dhaafsadeed Xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi.
Wararka ay saakay qorayaan Warbaahinta gudaha Kenya ayaa waxay kaga hadlayaan heshiis la sheegay in ay gaareyn Xukuumada Muqdisho iyo Nairobi, kaas oo ah in si hoose loo dhameeyo Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
Warbaahinta Kenya ayaa sidoo kale sheegaya in Wasiirka Arimaha Dibadda Kenya Munica Juma ay soo gaari doonto magaalada Muqdisho islamarkaana ay Soomaaliya kala hadli doonto Xiisadda taagan iyo Muranka dhinaca Badda.
Dhinaca Kale Baarlamaanka dalka Kenya ayaa u yeeray Wasiirka Arimaha Dibadda Kenya si ay wax uga weydiiyaan Xiisadda labada dal iyo safarka ay ku soo aadeyso Soomaaliya si ay ula kulanto Madaxda Soomaaliya. Munica Juma Wasiirka Arimaha Dibadda Kenya ayaa la filayaa in Baarlamaanka ay warbixin dhameystiran ka siiso xaalada guud ee ku xeeran khilaafka labada dal ee salka ku haya shirka 7-dii bishan ka dhacay magaalada London ee shidaalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda baarlamaanka Kenya Katoo Metito ayaa sheegay in Wasiirada ay doonayaan in ay wax ka weydiiyaan khilaafka dibolamaasiyadeed ee sii xumaanaya una dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya, sidoo kalena laga dhageysnayo bal halka ay salka ku heyso xiisada taagan.
Wasiirka Arimaha Dibadda Kenya ayaa maalmahaan ka maqneed dalkeeda waxayna ku sugneed dalka Germany oo ay kaga qeyb gashay Shir looga hadlayay ammaanka oo ka dhacay dalkaasi. Xoghaya Joogtada ah ee Wasaaradda Arimaha dibadda Kenya ayaa Warbaahinta u sheegay in Wasiirka ay xog ogaal u tahay wixii dhacay maalmahaan warbixinna laga siiyay halka ay wax marayaan.
Madaxweyne Xaaf “Culeeskii badnaa waa naga haray markii aan la heshiinay Dowladda”